Indlela yokuvula i-heater amanzi: izincomo ukusetshenziswa lisebenze
Ngeshwa, abakhileyo yesimanje eliphezulu liphumele izakhiwo kakhulu kukhona inkinga ajwayelekile gqwa amanzi off ashisayo. Ngakho-ke, izakhamuzi eziningi abangafuni ukuba sibekezelele ngisho ne ngokuphazamisa yesikhashana, ukuthola boilers. Kodwa akwanele ukuba umane ufake kudivayisi, futhi udinga ukwazi ukuthi uvule heater amanzi operation ntofontofo.
Ukwethulwa wokuqala iyunithi
Kuyaqondakala ukuthi ukufakwa kubhayela kufanele bakwenze uchwepheshe ofanelekayo. Uma kungenjalo, idivayisi uzolahlekelwa ilungelo isevisi yesiqinisekiso futhi ukulungisa. Eyokuqala ukuqala amasu futhi efiselekayo ukuphathisa master. Nokho, uma lesi sikhathi isivele elahlekile, ungenza ngokwakho.
Ngaphambi kokuvula heater amanzi, hlola izinga ukufakwa futhi uqiniseke azikho ukuvuza. Ukuze wenze lokhu, e lisebenze unqamukile kudingeka uthole amanzi. Ukubona uma ithangi ligcwele ngokuphelele emanzini, kubalulekile ukuvula umpompi ashisayo. Potekshaya amanzi aphuma kuso luyoba isibonakaliso ukugcwaliswa kubhayela. Ngemva kwalokho kudingeka qinisa impompi ngokucophelela uhlole imishini. Ukwenza ukuthi awekho ukuvuza emalungeni, kungenzeka ukuxhuma imishini kuya amapayipi dalula oyifunayo lokushisa Ukushisa amanzi.
Indlela yokusebenzisa kubhayela ezisebenza?
Kungenye into - kangakanani ukuthola indlela ukuze ujike amanzi heater. kodwa abaningi banesithakazelo kufanele asebenze kanjani, ngakho ungagcina amandla. Namuhla, kunemibono ezimbili luphambene mayelana nomsebenzi we-yunithi. Ngakho, abanye abantu bangase baphikise ngokuthi ukonga ngaphezulu ukuze ukucisha isibilisi ngesikhathi, uma ingasetshenziswa. Empeleni lokhu akulona iqiniso. Yedivayisi lula kakhulu ukuba silondoloze unomphela izinga lokushisa wayefisa amanzi kuka ukufudumeza futhi.
Ngaphezu kwalokho, izazi zithi ithangi njalo egcwele lingaphansi singangena ukugqwala. Eyesibili isici okufanele kucatshangelwe ngisho ngesikhathi ukufakwa - kule divayisi isisekelo. Kufanele ngaso sonke isikhathi hlola ukuthi abathintekayo iwizadi akazange miss kahle leli phuzu elibalulekile, ngoba ukuphepha wonke umndeni sincike kuyo. Ngaphambi kokuvula heater amanzi, udinga ukuhlola ukuthi kukhona amanzi kuwo. Yethulwe iyunithi ezingenalutho kweso uya phansi.
Ukukhethwa amanzi Ukushisa Imodi
ngaphambi kanjani ukuze uvule heater amanzi, okudingekile ukunquma imodi lapho azosebenza. Abanye abanikazi uzame ukulondoloza imali ngokudalula ongaphakeme lokushisa Ukushisa amanzi. Empeleni, lokhu kunciphisa kuphela nekusebenta idivayisi futhi inikeza ebhange. Nokho, amanye amamodeli boilers yesimanje kunikeza yokusebenza imodi ukonga. Kulokhu, abaseGibithe bayakunengwa ngukuphuza amanzi sishisiswe 55 degrees. Ukulondoloza wukuthi uma ukuthi lokushisa kufinyelelwe ezingeni ubuncane isikali imali, okuyinto usindisa abanikazi ekutheni njalo ukuhlanza ethangini.
Izici okusebenzela ukugeleza-ngokusebenzisa kubhayela
amadivaysi ezinjalo elula ngalolo akukho komkhawulo enikeziwe umthamo wamanzi ashisayo kuwo. Caveat kuphela ukuthi asakhelwanga reception ngesikhathi esisodwa shower ukuwasha izitsha. Ngaphezu kwalokho, lapho ingcindezi amanzi eqinile ke ngeke lokushisa eliphezulu kakhulu. Ngaphambi kokufaka heater amanzi, kudingeka uqinisekise ukuthi efulethini wiring enamandla ngokwanele ukuba imelane umthwalo ongako. ukufakwa ongafanele ungasenza ukushiya ngaphandle ugesi hhayi kuphela efulethini yakho, kodwa nayo yonke indlu, ngakho ukufakwa zedivayisi kufanele bakwenze onguchwepheshe.
Kanjani amandla leso amanzi heater kwesokudla? Kuyadingeka ukuba uhlole izinga yokucindezela umpompi. Uma kukuhle, ungavula uhlelo, uma kungenjalo, kungcono ukuhlehlisa kwethulwa. Amazinga amanzi ashisayo kulawulwa yindlela yezinkinobho kudivayisi. Lapho beqeda amanzi ukwelashwa kudingeka qinisa empompini nokunqamula lisebenze. Ngo o uhle eziningi zalezi zinsuku enikeziwe ukulondolozwa obala ngoba izilungiselelo okokuqala, ngakho usuke kudivayisi alandelayo abaseGibithe bayakunengwa ngukuphuza amanzi ngokushesha bondliwe, eliwu lokushisa kusengaphambili. Ngo kokuhlinzwa, uhlelo lwakha ishq, okumele ngezikhathi isuswe ngokugeza lemifanekiso kwengcindezi enamandla kwamanzi agelezayo.
Indlela yokuvula i-heater amanzi ngemva kwalokhu usebenza?
Njenganoma iyiphi enye ubuchwepheshe besimanje, kubhayela ifakwe idivayisi yezokuphepha esakhelwe ngaphakathi. Itholakala ngaphakathi thermostat futhi isebenze uma kwenzeka-sindisa ngokweqile zedivayisi. Ezimweni eziningi, ekuvaleni ngokuzenzekelayo kubhayela kubonisa inkinga engathí sina. With Ukuvikelwa olulodwa icushiwe, ungavele ucindezela inkinobho esisogwini thermostat bese uvula iyunithi ku. Endabeni ukusebenza kathathu Ukuvikelwa isikhathi esifushane kuyadingeka ukuze uthole imbangela futhi ahlubule ukuqedwa wakhe.
Smokehouse aphume umgqomo ukwenza elula. imithetho design Eziyisisekelo
Yiziphi nhlamvu? zesibhamu ngezandla zakhe
Trailer nendlwana ngezandla zakhe: ukulungiselela uhambo olude!
Ukudlulisa inkinobho - wiring idayagramu. Ixhuma bushing sekuqalile Legrand
Sclerotherapy ka hemorrhoids: incazelo Indlela, izici ukubuyekezwa
Indlela ukulungiselela esenzeka ngalo engu-65 owesifazane? Isimo merry iholide
Adenoids Okungalapheki ezinganeni: Izimpawu kanye Ukwelashwa
"Yesivakashi kusuka Esizayo ': nabalingisi ngumbhalo ifilimu Soviet. I protagonist we ifilimu "yesivakashi kusuka Esizayo '
Ukondla izinyosi ushukela isiraphu ebusika: imithetho kanye olinganise
Izibonakaliso cardinal zezinkanyezi: kuchaza, kucacisa futhi ukuhambisana
Association "Kuningi ifenisha": Izibuyekezo exubile, isinqumo ngesakho
Abaninikhaya bezindlu zokugcina isikhathi
Fitton: ukunakekelwa ekhaya ngalezi izitshalo ukushisa-onothando
Indlela ukuze usethe i-TV sedijithali TV digital? Indlela usethe digital TV eliwumhlaba?